Lapho ochwepheshe bezokwelapha nishilo ukuthi iyiphi insipho kubathinta kabi kwesikhumba ingane, liye wadala enezingane ezinezidingo ezikhethekile, eyenzelwe izingane ezineminyaka engu kuze iminyaka eyisikhombisa. Kukholakala ukuthi kuze kube lonyaka isikhumba ingane ikakhulukazi ngaphansi wethonya elonakalisayo alkalis. Baby insipho uye kokumpimpa zako ezisemqoka: amashumi eminyaka, kube enokwethenjelwa ivikela isikhumba obucayi ingane.
Baby isikhumba ngokuphelele contraindicated ku ukuthintana nanoma imuphi into zihlanganisa alkalis. Phela, isikhumba sengane kuyinto ebucayi kakhulu futhi yabahlanzi kalula ukubhubhisa ifilimu zokuzivikela kuso, nakho eyoqala ukuthuthukiswa izifo ukuvuvukala. Ngakho-ke, ingane insipho yenziwe ngezithako zemvelo, okungakwazi zibangele noma iyiphi yisihlungu noma awe komzimba kuphela. Ngakho-ke, ungakwazi ukuyisebenzisa kusukela zisencane.
Ake sibheke yini kuba ingane insipho. Ukwakheka kwalo mkhiqizo olubalulekile ngamaphesenti ayikhulu ngqo. Kuyo, ngeke uthole izithasiselo amakha, ngoba baxabane nomzimba esikhumbeni ingane. Ukwakheka kwalo amumethe emollients - lanolin, zemifino amafutha, glycerin. Kwezinye izimo, bangakwazi umphelelisi ayo amakhambi - chamomile, ngokulandelana, marigold, celandine, sage futhi wort iSt John sika.
Uma kukhona isidingo enjalo (isib, ukuzwela kukhuphuke ingane ukuba izinto equkethe alikhali), ingane insipho lingasetshenziswa ukugeza namanabukeni futhi raspashonok. Omunye zako ezisemqoka wukuthi kalula wageza off ngokuphelele.
Manje ezisendalini ungabona hhayi kuphela bendabuko yinhlama ingane insipho, kodwa futhi uketshezi. Kufanele kuqashelwe ukuthi kufanelekile nakakhulu ingane kuka yinhlama. Lokhu kungenxa yokuthi insipho liquid kuyinto yinhlama ethambile kakhulu (inani pH ivela amayunithi 5.5 kuya ku-7.) Liqukethe kancane kakhulu alikhali, uze kuqala uma ivuliwe imvelo ene-asidi. Kuyinto ngaphezulu okuqukethwe yemifino kanye herbal ayo ukuthi kubalulekile ingane isikhumba ukuba sihlale silinganisela. Lokhu insipho has a dispenser, ngakhoke ukonga kakhulu.
Baby insipho kungenziwa Kunconywa ukusetshenziswa omdala uma isikhumba kuyinto ebucayi kakhulu. Lapho insipho zihlanganisa Vaseline, uyakwazi ukuvikela isikhumba kusuka iphele ukuphuma. ewusizo ngokukhethekile insipho isikhumba ezithandwa flaking. Baby insipho kufanelekile kakhulu kubantu abaphethwe komzimba. Zingasetshenziswa hhayi kuphela ukugeza, kodwa futhi ukugeza phansi futhi amashidi.
Usuku ngalunye oludlulayo imikhiqizo ezingasho zemvelo avele emakethe, elakhelwe izingane. Imikhiqizo kangcono izingane non-enobuthi, musa abangele komzimba, abanayo yingozi isikhumba amakhemikhali ingane futhi perfume izithasiselo. Ukusebenzisa insipho ngezandla zezingane, ungagcina ngokuphelele isikhumba ingane yakho enempilo.
Isikhumba kwezingane kuyinto kusengozini emiphumeleni ezinobuthi kunabantu abadala. Bengakabi kwakheka isimiso sokuzivikela futhi ethukile. Ngakho-ke, ukuze sigweme izinkinga abanesikhumba womntwana, sebenzisa kuphela ephezulu, imvelo insipho enobungane.
Lapho bafundzi bacala agukat? Sifunda!
Ukuthuthukisa uhlaka Iqala Bright: Sibutsetelo amamodeli ethandwa kakhulu
Steve Imisebenzi, Mark Zuckerberg futhi 10 nabanye abantu yimpumelelo enibenzile engu-25
Kanjani ukuthuthukisa emcabangweni izinto: izindlela eziphumelelayo kanye nezincomo
Anti-amandla adonsela phansi ibhola - fun for intsha eziphambili
Lokho amantombazane bayakwazisa guys